ISwallows ilivove inkani iqhalaqhala elinguBenni McCarthy - Impempe
ISwallows ilivove inkani iqhalaqhala elinguBenni McCarthy
ULehlohonolo Majoro waMaZulu FC noWandisile Letlabika weSwalllows FC
Kusale kancane ukuthi alibeke ngembaba elokuthi babozile ngesikhathi bedlala neSwallows FC ngeSonto ntambama umqeqeshi waMaZulu FC, uBenni McCarthy.
ISwallows imvove yamdelisa lo mqeqeshi owaziwa ngokuzikhulumela nokwaziyo nokuchoma uma izinto zimhambela kahle njengoba ijike iqembu lakhe eliyaye lizigelezele yalenza olamthuthu emdlalweni weDStv Premiership obuseDobsonville Stadium.
UMcCarthy uzivumele yena ngemuva komdlalo ukuthi ezakhe zishaye udaka kulo mdlalo obubhekwe ngabomvu kodwa wavele waba muncu lamaqembu ekhombisa ukusabana wagcina uphele ngo 0-0.
“Kube wumdlalo omubi kakhulu lona, ikakhulukazi uma ubheka indlela esiyaye sidlale ngayo, sifakela izimbangi ingcindezi,” kusho uMcCarthy ngemuva komdlalo. “Kodwa namhlanje besindikindiki nje, futhi siphuzile nokungena egiyeni.
“Mhlawumbe kumele sincome imbangi yethu, isikhiphe ukwazi yasenza sadlala into esingayazi. Bakwazile ukuvimba uSikhakhane (uThembela) ukuthi angagijimi aye phambili njengenhlalayenza ngoba uSekgoto (uKgaugelo) ubemxine nzima kabi futhi eyingozi. USikhakhane kudingeke adlale ngendlela angayijwayele yokuhlala agade emuva enganyuki ukuyohlasela.
“Kumele sikuvume ukuthi asidlalanga neze kahle, kodwa ngoba sikwazile ukuthola iphuzu akusenani. Besidlala neqembu elilwela ukubuyela endaweni yesibili futhi elibangisana neMamelodi Sundowns neSuperSport United le phezulu,” kuchaza uMcCarthy, ofike wenza umlingo ejika Usuthu elwenza iqembu eliyingozi ngesikhathi esincane efikile kulo.
“Abazange basixake futhi emuva besihleleke kahle, kodwa phambili besizifele. Abadlali abaningi abazange bangene egiyeni namuhla okusiphoqe ukuthi silahle amaphuzu amabili.
“Kodwa-ke siphume nalo elilodwa sibhekene neqembu elindizela phezulu ngakho akumele ngikhale kakhulu. Kumele sibuyele ekhaya siyolungisa amaphutha, sizihlele kabusha ukuze kushaye uLwesithathu sesiyilungele iKaizer Chiefs,” kubeka uMcCarthy.
Previous Previous post: ISwallows noSuthu bavele basabana, walotha umdlalo wabo
Next Next post: UNhleko uqokelwe esokubumba amaBhokobhoko akusasa